चिसोले सिराहामा घोंगीको माग बढ्यो – NewsAgro.com
January 24, 2018 January 25, 2018 newsagro0Comments घोंगी, चिसोले घोंगीको माग बढ्यो, सिराहा
सिराहा, १० माघ । सिराहा तामासुइयाकी फुलो मुखिया विहिवार विहान घोंगी लिएर आएको एक घण्टा नवित्दै सबै विक्री भयो । प्रतिकिलो रु. ५० को दरले घोंगी बेचेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘चिसो बढेसँगै बर्षेनी घोंगीको माग बढ्छ ।’ अहिले माग अनुसार घोंगी ल्याउनै नसकेको गुनासो गरिन् ।
पछिल्लो समय बजारमा घोंगीको माग बढेको छ । पहिले चौधरी समुदायले मात्र खाने गरेको घोंगी पछिल्लो समय अन्य समुदायले पनि मन पराउन थालेका छन् । चिसोका बेला घोंगी झन बढी मन पराउने गरेकोले पनि माग बढेको लहान नपा ४ मनोज सहनीले बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले घोंगीलाई किरा भन्नेहरु पनि अहिले खुवै मन पराउन थाल्यो । त्यसैले पनि माग बढेको हुनसक्छ ।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएको जिल्लाका दक्षिणवर्ती गाउँका मलाह समुदायकी महिलाहरुले अहिले दैनिक रुपमा घोंगी बेच्न लहान आउँछन् । गम्हरिया, मेन्हा, कुसन्डी, तामासुइया लगायतका गाउँका मलाह महिलाहरु घोंगी बेच्न लहान आउने गर्छिन् । उनीहरु घोंगी मारेर बेच्नुलाई पेशा नै मानेका छन् । घोंगी बेचेर महिनाको १५-२० हजार आम्दानी हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।
लहान बजारमा दैनिक करिब ५ क्विनटल घोंगी विक्री हुन्छ । उदयपुरका व्यापारीहरु समेत लहानबाट घोंगी खरिद गरेर लग्न थालेका छन् । मेन्हाकी सुचिता मलाहले आफूले बेच्न ल्याएको घोंगी सधैं उदयपुर गाइघाटका व्यापारीले किनेर लग्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘व्यापारीलाई म प्रतिकिलो रु. ४० को दरले बेच्छु । उनीहरु त्यहाँ लगेर ६०-७० रुपैया प्रतिकिलो बेच्छन् ।’
घोंगी थारु समुदायको विशेष खानाको परिकारकै रुपमा मानिन्छ । घोंघी मानव स्वास्थ्यका लागि पनि महत्वपुर्ण मानिन्छ । घोंगी खानाले कम्मर दुख्ने कव्जियतलगायतका रोग निको हुने र शरीरमा शक्ति बढ्ने विश्वास थारु समुदायमा रही आएको छ । थारुहरुले माछा, मासु जस्तै घोंगीलाई पनि विशेष खानाको रुपमा लिईन्छ । थारु समुदायमा पाहुनालाई स्वागतसत्कार गर्न पनि घोंगीको परिकार खुवाउने चलन छ ।
← डोल्पामा कृषि प्राविधिक शिक्षाले आत्मनिर्भर बनायो
अब वृद्ध भत्ता ६५ वर्षमै दिने सरकारको निर्णय →